China Automatic SMC Production Line SMC igwe mpempe akwụkwọ ịkpụzi compound rụpụta na Factory | Ekechukwu
Akpaka SMC Production Line SMC igwe mpempe akwụkwọ na-akpụzi onyinye
1. Usoro nchịkwa na-achịkwa usoro PLC, nke nwere ike ịghọta nbudata akpaka.
2.A na-ebu ụzọ tinye resin ahụ dịka usoro ego nke usoro ihe omume ahụ si dị, ma na-akwụsị na-akpaghị aka mgbe ọnụọgụ ego ahụ ruru, wee kwụsị na-akpaghị aka mgbe a na-etinye onye na-eme ka ọ dị ala n'ime ego.
Ofụri Esịt Automatic resin inggwakọta Atụmatụ
1. Usoro nchịkwa na-achịkwa usoro PLC, nke nwere ike ịghọta nnabata akpaka.
2. A na-ebu ụzọ resin ahụ dabere na usoro ego nke usoro ihe omume ahụ setịpụrụ, na-akwụsị na-akpaghị aka mgbe ego ruru usoro ahụ, wee kwụsị na-akpaghị aka mgbe a na-etinye onye na-eme ka ọ dị ala na-etinye n'ime usoro ego.
3. A resin oriri n'ọdụ ụgbọ mmiri, a ala shrinkage gị n'ụlọnga oriri n'ọdụ ụgbọ mmiri na a styrene oriri n'ọdụ ụgbọ mmiri, a filler ndepụta mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-debeere Stirring Kettle.
4. PLC nwere ike ịchekwa ọtụtụ ntụziaka SMC dị iche iche, enwere ike iji ọnụ ọgụgụ mee ihe.
5. A na-eme ka igwe na-akpụ akpụ dị nchara nke 201 maka ntachi obi.
6. A na-ebufe resin ahụ site na iji mgbapụta gia ma ọ bụ bọmbụ na-agba ọsọ na ọnụọgụ nke 4-6 cubic mita kwa awa.
7. Ma irgbanye Kettle na resin nchekwa tank nwere okpomọkụ ihe mmetụta maka inyocha na ọnọdụ okpomọkụ nke resin mado.
8. Nchịkọta calcium carbonate bụ usoro nnyefe agụụ, na oge nkwụ ụgwọ nke calcium carbonate ọ bụla bụ ihe dị ka nkeji 10.
Ofụri Esịt Automatic Production Line inggwakọta System Atụmatụ
1. Mejupụtara atọ tent nke elu viscosity gia nfuli, igwekota na electronic akara usoro
2. A na-agbapụta nfuli A, B, na C site na servo motors. N'ebe a na-emepụta ihe, nfuli B na C na-agbaso mgbapụta A iji mepụta njikwa mechiri emechi, ma kwadebe ya na igwe na-asọpụta nke nwere puku puku atọ.
3. B, C mgbapụta abịa na orùrù orùrù, ike bụ 100 lita na 50 lita
4. Nfuli B na C na-ebugharị ya site na US Weiken gear metering pump. Igwe mgbapụta ahụ na-eji mgbapụta Wicken ma ọ bụ ihe mgbapụta dị na ya. Ihe nfuli A, B, na C nwere ihe eji akpachapu anya nke oma iji lelee onodu ego nke resin tapawa magnesia tapawa na agba agba. Mgbe ejiri ihe ọ bụla mejupụtara A, B, na C, usoro ịntanetị na-akwụsị na akpaghị aka.
Plastic film obosara
Ihe nkiri Max. dayameta
SMC Mpempe akwụkwọ
Resin tapawa viscosity
Dị ka usoro ahụ si dị
Eriri ọdịnaya 10% -40%
Dị ka onye ọrụ chọrọ
Faiba glaasi nlereanya
Ọnụ ọgụgụ nke eriri iko
1 / ịtọ
Faiba glaasi ogologo
Eriri dispersion edo ngwaọrụ
Ntughari mpaghara ọsọ
Ntinye mpaghara mpaghara ntanetu obosara
Ntinye mpaghara mpaghara ogologo
Main moto ike
Agba & MgO adingbanye usoro
Igwe mpempe akwụkwọ SMC-1200
2000L akpali akpali ketulu (2 tent nke 22KW Motors na 2 tent nke mbelata)
22KW High Speed ​​Disperser & 150L inggwakọta Drum (igwe anaghị agba nchara)
Akwa ọsọ disperser
High nkenke eruba mita
Fnjikwa dị ala
Nke gara aga: igwe na-etinye ibo ụzọ
Osote: Automatic mmepụta akara
Gear metering mgbapụta